fitaovana fikosoham-bary sy faritra tsy ampy Factory, mpamatsy | Fitaovana fikosoham-bary any Sina
Ny milina fanodinana dia karazana fitaovana fanorotoroana vaovao novolavolaina iraisam-pirenena tamin'ny tapaky ny taona 1980. Ny haitao vaovao momba ny fitrandrahana extrusion dia misy akony lehibe amin'ny fitehirizana angovo, ary natolotry ny indostrian'ny simenitra iraisam-pirenena ho toy ny fitotoana fampandrosoana. Teknolojia vaovao amin'ny asa-tanana.
Ny fikosoham-bary mitsangana dia fitaovana fikosoham-bary vita amin'ny vy.
Vary atsangana arina
JGM2-113 fikosoham-bary dia fanodinam-pahefana haingam-pandeha. Ny ampahany fikosohany dia misy peratra fitotoam-bolo miodina ary roera fitotoana miorina sy mihodina miodina miaraka amin'ny peratra fitotoana.
Vary fananganana simenitra no ampiasaina hanotoana akora simenitra. Ny fotokevitra iasany dia ny: akora akora miditra ny fantsom-panafahana amin'ny alàlan'ny valizy hidin-drivotra telo làlana, ary ny fantsom-panafahana dia miditra ao anatin'ny fikosoham-bary amin'ny alàlan'ny sisin'ny fisarahana.
Ny kodiaran-tsolika JLMS dia ampiasaina amin'ny fikolokoloana simika clinker.
Ny fikosoham-bary mitsivalana dia fitaovan'ny fikosoham-bary fanamafisam-peo izay manamaina ny silavo ary hikororoka ny mason-koditra.